Ukufundisa abantwana ukuba baKhowudi basebenzise iMody Operation
NguCamille McCue, uSarah Guthals
Umsebenzi ophumeleleyo onokuba yinkohliso kwiikhowudi ezincinci ekuqaleni imodyuli , ekwabizwa ngokuba imodyuli kwaye ngokuchasene . Imodeli yamanani amabini yintsalela emva kokwahlulwa kwamanani amabini.
Umjikelo oluhlaza okwesibhakabhaka k 9
Lo msebenzisi unokuba luncedo ekubhaleni usetyenziso ngokusekwe kwimeko-yokwenyani yelizwe. Umzekelo, yithi une $ 20.00. Ufuna ukugqithisa i $ 3.50 ngqo kubahlobo abaninzi kangangoko, kwaye ufuna ukwazi ukuba ingakanani imali oza kuba nayo. Ke uya kufuna ukusombulula imibuzo yeyiphi i-quotient ye-20.00 / 3.50? Yintoni intsalela ka 20.00 / 3.50? Impendulo yalo mbuzo wegama iya kuba Unganika abahlobo abahlanu i-3.50 yeedola kwaye uya kushiyeka nge-2.50 yeedola.
Yintoni ebaluleke ngokwenene kukuba uGoogle ubonelela ngemodyuli kwisibali-manani esikwi-Intanethi! Ke ukuba wena nekhowudi yakho uhlala usenza iphutha, ungajonga imod equation yakho kuGoogle ngokulula. Yiya kugoogle.com kwaye uchwetheze inombolo1% yenombolo2 kwaye isixhobo sokubala sivela ngempendulo yakho. Kukho neqhosha le mod kwimatshini yokubala; luphawu%.
Imowudi kwi-pseudocode ihlala imelwe ngophawu lwe-, kuba isetyenziswa kakhulu kwiilwimi ezisekwe kwisicatshulwa njengePython kunye neJava.
number1 % number2
6.89 % 5.9
Iipilisi ezijikelezayo zeorenji
Kuqala, unokufumana mod ibhlokhi phantsi kwecandelo labaSebenzi. Umzekelo, lo mfanekiso ubonakalisa imodyu yokuvavanya 9 mod 8, olingana 1.
Ibhlokhi yeemodyuli efumaneka kudidi lwabaSebenzi.
KwiPython, umqhubi weemodyuli uyafana kakhulu kwimisebenzi esisiseko yezibalo ezinje ngokudibanisa, ukuthabatha, ukuphindaphinda, nokwahlulahlula. Usebenzisa nje% isimboli phakathi kwamanani. Iyafana ncam nemizekelo ye-pseudocode yazo zombini iinamba kunye nedesimali.
Ukuxhamla kwimiphumo emibi yeekati
oxycodone acetaminophen 5 325 iziphumo ebezingalindelekanga
pyrantel pamoate itshathi yeekati zetshathi
yintoni ipilisi l484
ukucoca njani idiski enzima
iziphumo ebezingalindelekanga ze-effexor